Izindaba - UHuiyu Fluid Attended Analytica 2018 EMunich Germany
I-Huiyu Fluid Ihambele I-Analytica 2018 EMunich Germany
UHuiyu fluid waya kwi-Analytica 2018 eMunich Germany. Idokodo likaHuiyu, i-B1.528-6 #, Amapompo wethu wekhwalithi angabizi kakhulu ajabulisa amakhulu ezivakashi eziqeqeshiwe.
I-analytica ehola phambili kwezentengiso emhlabeni ibiyisiqinisekiso sakho sokwethulwa ngempumelelo kobuchwepheshe obusha bezinto zaselabhorethri kanye ne-biotechnology eqonde esikhathini esizayo cishe iminyaka engama-50. Kungumhlangano wemboni obaluleke kakhulu futhi uletha ndawonye lonke uhla lwezihloko eziphathelene namalabhorethri ocwaningweni nasembonini.
Umhlangano wemboni omkhulu kunayo yonke emhlabeni — umbukiso wamazwe omhlaba wokuhweba
i-analytica iyimakethe ehamba phambili emhlabeni yemikhiqizo nezinsizakalo kulo lonke uchungechunge lwamavelu wezinqubo zelebhu zanamuhla. Yilapho kuhlangana khona abadlali ababalulekile bezimboni nabenza izinqumo.
Imikhakha yombukiso eyakhiwe — I-spectrum ephelele
I-analytica kuphela ekunika ukubuka konke okuphelele kwalo lonke uhla lwezihloko eziphathelene nelabhorethri ocwaningweni nasembonini.
● Ukuhlaziywa nokulawulwa kwekhwalithi
● Biotechnology, Life Sciences kanye diagnostics
● Ubuchwepheshe belebhu
Ubuchwepheshe obugxile kakhulu-Ingqungquthela ye-analytica
Ingqungquthela yezinsuku ezintathu ye-analytica iyinhliziyo yesayensi ye-analytica. Ochwepheshe abaziwayo babika ngesimo samanje sezinto ezintsha zomhlaba. Inzuzo evela engxoxweni ekhuthazayo nososayensi abaziwayo abavela emhlabeni wonke.
Ukudluliselwa okuqondile kolwazi ekusebenzeni-uhlelo lwe-analytica lwemicimbi ehlobene
● Uhlelo oluhlose ukuzijwayeza lwe-analytica lwemicimbi ehambisanayo luzungeze ukudluliswa kolwazi, amathiphu wokwenza okuhle kakhulu nokushintshana okuqondile kwemibono nolwazi.
● Amalebhu wethu abukhoma wethula amasu amasha wokusebenzisa kanye nezinhlelo zemishini ezindaweni ezijabulisayo, zangempela zaselebhu.
● Sebenzisa izinkundla ngezihloko ezithile ukubamba izingxoxo nochwepheshe bamazwe omhlaba kanye nozakwethu.
● Iya emibukisweni yethu ekhethekile ezihlokweni ezishisayo ezifana nokuthi “Ukuphepha Emsebenzini / Impilo Nokuphepha Emsebenzini”.
● Uhlelo lwemicimbi ehambisanayo luhlanganiswa yizinsuku ezikhethekile ezinjenge- “analytica Job Day” ne- “Finance Day” kanye neminye imicimbi ebalulekile.